Guta guru reSolomon Islands rakarambidzwa kusvika pamba mushure memhirizhonga ine mhirizhonga
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Solomon Islands Breaking Nhau » Guta guru reSolomon Islands rakarambidzwa kusvika pamba mushure memhirizhonga ine mhirizhonga
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • mhosva • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • nhau • vanhu • Kutarisirwa • chengetedzo • Solomon Islands Breaking Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Honiara akaiswa palockdown mushure mekunge mhirizhonga yaedza kupaza imba yeparamende
4 mazuva apfuura
Mapurisa eHoniara apfura hutsi hunokachidza varatidziri vakapisa zvivakwa pamwe nekupisa kamba yemapurisa pedyo neparamende.
Zviremera zvehurumende yeSolomon Islands zvakazivisa kuti guta guru reHoniara rave kurambidzwa kusvika pamba izvozvi.
Guta renyika yechitsuwa chePacific rakavharwa mushure mekunge mhirizhonga yemhirizhonga yaedza kupaza chivako cheparamende.
Maererano Solomon IslandMutauriri wemapurisa, mapurisa aridza hutsi hunokachidza vanhu vakapisa zvivakwa pamwe nekupisa kamba yemapurisa padyo neparamende nhasi.
“Boka guru revanhu rakaungana pamberi peparamende. Vaida kuti mutungamiriri wehurumende asiye basa - ndiwo fungidziro yeveruzhinji - asi tichiri kuongorora zvikonzero zvacho. Chakakosha ndechekuti mapurisa ave kutonga zvinhu uye hapana ari kubuda mumigwagwa,” akadaro Honiara mupurisa.
Sekutaura kwemupurisa uyu, mapurisa anga asingazive kuti pane kukuvara here panguva iyi.
Canberra's official Smart Traveler zano sevhisi yakayambira zvizvarwa zveAustralia muguta guru reSolomons kuti vangwarire.
“Situation iri kuitika Honiara nemhirizhonga yevagari vemo. Ndapota chenjererai, rambai muri pamunenge muri kana zvisina njodzi kuti muite izvi uye mudzivirire mhomho,” rakadaro.
Mhirizhonga iyi inonzi ine chikwata chevaratidziri vakaenda kuHoniara svondo rino vachibva kuchitsuwa chiri pedyo cheMalaita.
Indo -German Chamber of Commerce Inozivisa Nyowani ...
Maguta akanakisa epasirese emumigwagwa art - kubva kuNew...
Akanakisa muIndasitiri anoremekedzwa paWTM London
Kufamba Kutsva kweCuba: Hapana Kuvharirwa, Hapana Miedzo
4 kubva pa5 dzepasi rose dzemahombekombe egungwa dziri muUS
Kenya Mashiripiti eMagamba Matsva ekushanyirwa kuWTM London ne...
Orlando kuenda Nassau. New Frontier Airlines Flight
Nhamba Yekutanga Mobile App paApple Store muSaudi Arabia
Smart TV Inopa Nyowani Filmmaker Mode
New Acura Integra: Bold uye Turbo Yakachajwa ye2023
Dense mhute inonotsa anopfuura zana ndege kuMoscow...
Sandals Resorts Zvino Kupembera Yakanakisa Gorofu uye Spa...
Sachigaro weAfrican Tourism Board Anochemera Africa...
New Thanksgiving Stuffing Recipes Yakarungwa Kubva Kuchena...
Slovakia yekutevera Austria mune yakazara COVID-19 kukiya